Faransiiska ayaa qaban doona shir ka hor doorashooyinka muhiimka ah ee Liibiya - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Faransiiska ayaa qaban doona shir ka hor doorashooyinka muhiimka ah ee Liibiya
Conférence-débat sur : « La révolution numérique dans la stratégie de Défense » en amphithéâtre Poincaré devant des élèves des promotions 2014 et 2015, des enseignants chercheurs et des étudiants de l’ENSTA
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa martigelin doona shir caalami ah oo ku saabsan Liibiya 12-ka bisha November. “Marka la eego doorashooyinka December, Faransiisku wuxuu qabanqaabin doonaa, shir caalami ah oo ku saabsan Liibiya 12-ka Nofeembar,” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Faransiiska Jean-Yves Le Drian, intii uu ku guda jiray shir jaraa’id oo uu ka dhinac qabtay kulamka golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay.
Le Drian iyo wasiirada Jarmalka iyo Talyaaniga, Heiko Maas iyo Luigi Di Maio, ayaa sidoo kale wada guddoomin doona kulan loogu gogol xaadhayo Libya Arbacada oo ka dhici doona New York.
Faransiisku wuxuu codsanayaa in doorashada lagu qabto waqtigii loogu talagalay iyo in ay ka baxaan ciida liibiya ciidamada shisheeye iyo calooshood u shaqeystayaashu,” ayuu yiri Le Drian.
Wasiirka arrimaha dibadda Liibiya Najla al-Mangoush dhammaadkii bishii Ogosto ma uusan diidin in dib loo dhigo doorashada.
Madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi, oo taageero u muujiyay musharraxa xoogga badan ee Liibiya Khalifa Haftar, ayaa ku cadaadinaya in doorashooyinka sharci-dejinta iyo madaxtinimada la qabto sidii loo qorsheeyay 24-ka Diseembar.
Mareykanka ayaa sidoo kale ku tilmaamay ra’yi-ururinta “fursadii ugu wanaagsaneyd ee ay heshay toban sano ka dib, si loo soo afjaro khilaafka.”
Previous article31 dal ayaa qaadacaya shirka Durban ee Arbacada
Next articleKhatarta ay leeadahay Kiimikada Warshaddaha Isbuunyadu